Kiiskii dacwadeed ee maanta lagu waday in lagu soo Oodo Wasiirka Deegaanka Kenya oo dib u dhacay. | Starfm.co.ke	Sunday, May 19th, 2013	Home
Kiiskii dacwadeed ee maanta lagu waday in lagu soo Oodo Wasiirka Deegaanka Kenya oo dib u dhacay.
Share09.Aug.2012:- Dacwadii lagu soo oogayay Wasiirka deegaanka Kenya oo la filayay in ay maxkamada ka bilaabato Maanta oo Khamiis ah ayaa dib loo dhigay.
Madaxa Maxkamada sare ee Magaalada Nairobi oo lagu waday inay ka furanto maxkamadaynta wasiirkaan ayaa sheegay in aan wali qaab dhamaystiran wasiirka loogu gudbin faylashiisa islamarkaana uusan helin warqada Yeeritaanka maxkamada.
Garsoore Lucy Nyambura ayaa amar ku bixisay in xildhibaanka Matuga loo gudbiyo warqada Yeeritaanka Maxkamada Waxa ayna sheegtay in dacwada wasiirka Deegaanka ee quseysa jeedinta Khudbad nacayb ku dhisan ay bilaabanayso maalinta Arbacada soo aadan.
Dhawaan ayuu Wasiirka deegaanka Chirau Ali Mwakwere ku guul daraystay isku day uu ku doonayay in uu si KMG ah ugu hor istaago in la xiro islamarkana maxkamad la soo taago isaga oo loo haysto jeedinta khudbad nacayb ku dhisan.
Garsooraha maxkamada sare Florence Muchemi ayaa ku gacan sayrtay in ay bixiso amar lagu hor istaagayo xiritaanka xildhibaanka Matuga.
Garsoore Florence ayaa sheegtay in codsiga Mwakwere uu ahaa mid dagdag ah islamarkana waxa ay amartay in kiiskani la dhagaysan doono Todobaadka soo socda.
Mr Mwakwere ayaa qarka u saaran in uu waayo jagadiisa wasiirka deegaanka ka dib markii maxkamada ay soo saartay amar uu ku hor tagayo maxakamada si dacwad loogu soo oogo .
Wasiirka deegaanka Chirau Ali Mwakwere ayaa maxkamada sare u gudbiyay codsi dagdag ah oo uu kaga hortagayay in ay xiraan booliiska lana soo taago maxkamada kiiskaasi oo iminka uu ku guul daraystay .
Wariyaha Starfm ...	kenya oo doonaysa in la kordhiyo tirada AMISOM	May 17, 2013 Dowlada dalkani kenya ayaa doonaysa in la kordhiyo tirada ciidamada nababad ilaalinta Midowga afrika Amisom ee ka howlgala ...	Xeer ilaaliyaha guud oo sheegay in baaritaankii lagu sameeyay rabshadihii tana Riiva dhawaan la soo bandhigi doono.	May 17, 2013 Xeer ilaaliyaha guud ee dalka ayaa sheegay in warbixinti baaritaankii lagu samayay isku dhacyadii Tana Riiva oo ay ...	Sports	Falcao ” Warka Mustaqbalkeyga Laga Sheegey Waa Been Abuur ”.	May 18, 2013 Weeraryahanka kooxda Atletico Madrid Radamel Falcaoayaa beeniyay in uu wax ka og yahay in ay jiraan wadahaadlo uu ...	Seedorf Oo Loo Badinayo Inow Tababara Ka Noqdo Kooxda AC Milan	May 18, 2013 Mulkiilaha kooxda Milan Silvio Berlusconi ayaa dhawaan sheegay in tababare Massimiliano Allegri uu ka tagayo kooxda isla markaana ...	Tababarahii Hore Ee Kooxda AC Milan Massimiliano Allegri oo U Wareegay Kooxda Roma	May 18, 2013 Mulkiilaha kooxda Milan Silvio Berlusconi ayaa tibaaxay in tababaraha kooxda Massimiliano Allegri uu u wareegayo kooxda Roma marka ...	David Moyes Kulanka So Socoto Maxoy Samedonaa ?? Maxadna Ku Qiyaasi Karta ?	May 18, 2013 Tababaraha cusub ee kooxda Manchester United, David Moyes ayaa diyaar u ah in uu bilaabo shaqada kooxda United ...	Xidiga Barcelona Andres Iniesta Oo Aan Ku Faraxsaneyn La Joogitanka Kooxdaasi	May 18, 2013 Ninka labaad ee ugu wanaagsan kooxda Barcelona Andres Iniesta ayaa sheegay in uusan ku faraxsaneyn xiligan Barcelona .